Ndi-mo-Udo Night Atụmatụ na amụma - June 20 - Stake website - jluis37.com
Ndi-mo-Udo Night Atụmatụ na amụma – June 20 – Stake website
Posted by Lloyd Wilson On June 18, 2021 In My Blog
Ndewo, na-alụ ọgụ Fans na anyị na-ọzọ Las Vegas ọzọ pleasure ọgụ abalị kaadị t a izu ụka. Anyị enwetala ụfọdụ ndị egwuregwu na-atọ ọchị dịka Khaos Williams, Marlon Vera, na Korean Zombie na-alụ ọgụ na kaadị a bụ ndị na-enye ndị na-egwu ya ihe ngosi dị mma mgbe niile. E nwere ụfọdụ egwuregwu na-adọrọ mmasị na kaadị a ebe ndị na-agba mgba siri ike ga-alụ ọgụ iji chọpụta onye kwesiri oche dị elu na ogo. Ndi banger na-edezi kaadị a t anyi enweghi ike ichere ka ọgụ ndi a gwuo, dika ka anyi banye na!
Marlon Vera Vs Davey Onyinye
Ndị agha na-agba mgba na-arịba ama, onye nnọchi anya nnọchi anya ọzọ nke Stake na-eme ihe na ngwụsị ụka a na-ewere obi ụtọ na-eto eto. Marlon banyere agha a t nọmba na-esote aha un t ebumnuche ịbọ ọbọ maka ọnwụ ya nweren’oge mmalite ya. Davey Grant onye meriri Chito na 2016 nwere ụzọ dị egwu ma ọ chọtala ụzọ ya website Id mmeri mmeri 3. Ọsọ that a na-eme na nkewa bantamweight ga-ewetara anyị onye mgbachasị anya doro anya bụ onye dị njikere maka ịsọ mpi na ndị ọkachamara.
Marlon”Chito” Vera bụ otun’ime ndị na-asọ mpi na UFC bantamweight roster. Ji nganga na-anọchite ọkọlọtọ Ecuador na azụ un kemgbe 2014 na UFC, Chito nwere ọrụ na-atọ ụtọ jupụtara na-acha ọkụ ọkụ. Chito wetara akara ngosi 81 percent siri ike na Octagon tinyere 6 knockouts na ntinye 7.
Ọ dị mma ka ha na-abịa na-ejide eriri ojii d e BJJ ma na-egosipụta ngosipụta dị iken’oge ọ bụla ọ banyere UFC Octagon. Na ọgụ abụọ ikpeazụ ya, Chito kụpụrụ Sean O’Malley kachasị mma nke ndị UFC ma tụfuo mkpebi dị nso na Eze Rio, Jose Aldo. Chito egosila t absolutely nwere ike ịnọnyere ndị kachasị mma na ọ ga-ele anya ịlaghachi azụ na nnukwu ejiji na ngwụcha izu a.
Hype bụ àgwà that a na-enyefefe, Chito have been mkpuchi niile nke Sean O’Malley mgbe ọ kụpụrụ ya na onye mgba ọhụrụ anyị bụ Davey Grant ga-ele anya ịnya ụgbọ elu hype website Id ịkwụsị ihe ngosi Chito na ngwụcha izu a. Ndị na-agba ọgụ ga-enwe mmasị ịmara na nke a bụ nlọghachin’etiti ndị agha abụọ ahụ ka Davey meriri Chito na-eto eto website Id mkpebi laghachi na 2016.
Davey bu onye mbu ndi nwere ikike knockout na egwuregwu ntinye nke kwesiri ntukwasi obi. Ọ ga – ele anya iji mejuputa acumen un nke ọma d e ụdị atụmatụ egwuregwu siri ike nke nyere un oge iti Chito oge mbụ.
Ntughari na-adịkarị mma maka onye mmeri nke ọgụ mbụ mana na nke a, Chito ghọrọ onye ọgụ ka mma kemgbe ọgụ ikpeazụ ha zutere. Chito gosipụtara ndị na-asọ mpin’egwuregwu ikpeazụ un, o gosipụtara na ya nwere igwe iji bụrụ ọkaiben’otu ụbọchị. Contrarily Davey nwere njem siri ike iji rita nsogbu a, mana o mechara rute ebe a website d e ịnakọta ọnụ nke mmeri ya.
Ndị agha abụọ that a gbakọtara nke ọma ebe ọ bụla ọgụ a na-aga mana Chito ga-enwe ihu na mgba, ebe Davey ga-elegide anya t anya ya dị arọ na ụkwụ. Anyị chere na Chito bụ onye ọgụ ka elu ebe a na ọ ga – alụ ọgụ nwere ọgụgụ isi ị gaferen’izu ụka a. Obi siri anyị ike na nwa anyị nwoke ma na-enye mmeri abụọ na Chito iji merie izu ụka a, yabụ gbaa mbọ banyen’ọganihu nzuzu a. https://promotions.stake.com/marlon-vera-winnings/
Amụma – Marlon Vera website Id Mkpebi
Nsogbu -lọ Ọrụ – 2.65 (Nsogbu nwere ike ịgbanwe, lezie anya mgbe nsogbu ga-aga Live Stake)
Anyị ejirila aka anyị nwee ihe mgbawa na ime ihe ike na ọgụ, ọgụ na-arụ ọrụ mgbe niile mgbe anyị nwere ọgụ abụọ na-aga nke ọma. Agha ahụ ga-eme ka ndị na-esote 5 na-esote ọgụ maka ịlụ ọgụ maka iwepụ aha. N’ime isi ihe a, anyị ga-agba akaebe t 4″Korea Zombie” Chan Sung Jung na-ewere ọkwa 8 Dan”50K” Ige.
The Korean Zombie abụwo onye na-eme egwuregwu zuru oke maka ndị na-alụ ọgụ ka ha merie 6 arụmọrụ t 1 ọgụ abalị na ọrụ 9 UFC ya. Korean Zombie ejirila onyinye kacha mma nke UFC lụọ ọgụ dịka Dustin Poirier, Jose Aldo, na Frankie Edgar, wdg, na-apụtakarị n’elu. O nweela ọnụego 100 percent zuru oke na ndị UFCn’ihi na ọ kwenyeghị ịhapụ aha unn’aka onye ọka ikpe.
Ọ na-agba ọsọ egwuregwu MMA nke ọma website Id otuto un bụ eriri ojii un t Taekwondo, Judo, na eriri aja aja na BJJ. The Zombie ga-ele anya ịlaghachi na kọlụm mmeri na isi ihe dị ka mgbe ọ bụla ọ banyere Octagon na ngwụcha izu a.
Dan Ige bụ onye ọzọ na-atụrụ ndụ nke batara na Octagon iji bulie aka ya mgbe ọ na-enye ndị na-eme egwuregwu ihe ngosi dị mma. Aha agha un 50K na-egosiputa ego ego nke ndi UFC nyere ndi agha kachasi obi uton’abali. Dan Ige egosila ugbu a t o kwesiri ịlụ ọgụ megide ụmụ okorobịa ise featherweight mgbe ha chịchara UFC. Dan bụ onye mbụ na-egwu egwu na kickboxing ma nwee egwuregwu siri ike na-akwado ya website Id eriri ojii ya na Jiu-Jitsu.
Dan gbagoro na nnukwu ogbo mgbe o gosipụtara ụwa ya siten’ịkụ Edson Barboza. Nke a mere ka ọ bụrụ ebe omume Calvin Kattar ebe ọ bịara dị mkpụmkpụ mgbe mkpebi siri ike gasịrị. Dan Ige egosila t absolutely nwere ikike na ụwa man’izu a agaghị adị iche na Hawaii.
Nke a bụ ọgụ kachasị na kaadị na mkpụrụ self love tụgharịa isi ihe na-atọ ụtọ mgbe niile ka ha na-apụta. Onye mmerin’izu a anaghị ekwe nkwa ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ d e ọ ga-ekwe nkwa ịlụ ọgụ. Ndị a bụ ndị ọgụ abụọ bụ ndị ama ama maka itinye ọgụ na-atọ ụtọ maka ndị agbapụ d e njikọta ha ọnụ na-akpọ maka mgbawan’ime Octagonn’izu a.
Onye Korea Zombie bụ onye ọgụ na-agbawa agbawa na-ahụ ike ịkụtu ọkụ nke ndị na-emegide ya ma na-eche na Dan bụ olu dị arọ na nke ziri ezi. Dan bụ onye elu akara, mana Zombie nwere egwuregwu nrube isi dị egwu. Ọgụ a ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ebe ọ bụla omume ahụ gosipụtara. The Zombie emeriwo ọgụ un niile website t imecha t UFC Octagon na ọ ga-elekwasị anya na-etinye nrụgide na Dan ịchụpụ ya. O doro anya, Dan nwere nnukwu agba ma emechabeghị na ọrụ 18-ọgụ ya.
Brian Ortega gosipụtara ụkpụrụ iji tie Zombie nke bụ website t nyocha na nrụgide tụrụ. Anyị kwenyere na Dan Ige nwere ikike iji mebie mkpebi website t atụmatụ egwuregwu mara mma. Anyị nwere nnukwu nkwalite maka ndị na – agba ọgụ anyị bụ ndị na – anụcha ebe a, anyị ga – akwụ ụgwọ okpukpu abụọ na Zombie na Dan ma ọ bụrụ na ha akwụsị ọgụ ahụ, yabụ gafere nkwalite nzuzu a. https://promotions.stake.com/ufc-main-event-2x-winnings/
Amụma- Dan Ige website Id Mkpebi
Nsogbu -lọ Ọrụ – 3.50 (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe, lezie anya mgbe nsogbu ga-adị na Stake).
Enwetaghị ọgụ ndị that a dị ịtụnanya ma nweta nsogbu UFC kacha mma na Stake.com https://stake.com/sports/mma/featured
EURO 2020 Knockout Stage Preview – Blog blog